I-MMF: Ocean Suite - I-Airbnb
I-MMF: Ocean Suite
507 okushiwo abanye
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Karen & Corey
U-Karen & Corey Ungumbungazi ovelele
Siyakwamukela e-Moulton Meadow Hobby Farm. Indawo yethu engamahektare ayi-14 inokubukwa okuhle kakhulu kolwandle nezintaba lapho ungafinyelela khona izindlela ezimangalisayo zokuhamba izintaba noma wehle ngedrayivu uye ogwini. I-suite yethu equkethwe ngokwakho iwuhambo nje lwemizuzu eyi-7 ukuya ezindaweni zokudlela nezindawo zokudlela. Uzoyithanda indawo yami ngenxa yemibono, ubumfihlo, ubumnandi, ikhishi, nombhede othokomele. Indawo yami ilungele izithandani, izihambi ezizimele, abahambi bebhizinisi, imindeni (enezingane).
Indawo yethu yangasese equkethwe mathupha inokubukwa okuhle kakhulu ku-Bowen! Ithokomele ngokwedlulele nge-flair yezwe laseFrance kufaka phakathi phansi ngokhuni oluqinile, indawo yomlilo kanye nekhishi eligcwele eline-double burner ephathekayo, i-microwave, i-flat grill, i-rotisserie kanye ne-bbq ngaphandle. Awukho uhhavini kodwa uma ufuna ukubhaka siyajabula ukukuvumela ukuthi usebenzise eyethu endlini enkulu. Kukhona indawo yokuhlala yangasese lapho ungacwilisa khona imibono futhi uphumule. I-suite ilungele izithandani. Singakwazi ukuhlalisa abantu abangu-4 uma siceliwe kodwa le suite ilungele abantu abangu-2 noma izithandani ezinezingane ezincane. Indawo efanelekile yemindeni emikhulu noma iqembu labantu abadala yi-Shipyard Suite yethu entsha: https://abnb.me/LUkfrXUHpjb
I-Oceanview ilala emibhedeni elingana ne-Queen ka-Queen ethokomele ekamelweni bese kuthi 2 ku-Queen ikhiphe usofa egumbini lokuphumula. I-suite ine-TV eneCable/Netflix/Prime ongayibuka amafilimu ngosuku lwemvula☺
Uma ufuna ukushaya olwandle ungamane ushayele wehle ngomgwaqo futhi ufinyelele kunoma iyiphi inombolo yamabhishi. Sincoma ukuthi ube nemoto njengoba sinomgwaqo ohamba onomoya ophakeme. Siku-300 ft ngaphezu kwezinga lolwandle okuyisizathu sokubuka kwethu okumangalisayo☺️
Endaweni yethu sigcina izinkukhu, izimbuzi kanye nengulube enezisu. Uxolo azikho izinja ezivunyelwe njengezilwane zethu uhla lwamahhala.
4.90 · 507 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-507
Sitholakala phezulu kakhulu komgwaqo omude omuhle, onomoya. Sinobumfihlo obuphelele futhi sijabulela konke lokho imvelo engakunikezayo. Ungamangali ukubona izinyamazane zasendle zidla utshani noma izinkukhu zethu ezizulazula ngokukhululeka. Ungakwazi ukujabulela imvelo noma ukushayela i-7min edolobheni uyothenga futhi udle noma ubambe isikebhe.
Ibungazwe ngu-Karen & Corey
I-suite itholakala ohlangothini lwe-Far North East lwendlu ngakho-ke ukuxhumana kuzoba kuncane.
UKaren & Corey Ungumbungazi ovelele